Ganacsato Soomaali oo dil, dhaawac iyo dhac loogu geystay Koonfur Afrika – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Burcad Koonfur Afrikaan ayaa la sheegay inay toogteen Labo Ganacsato Soomaali oo mehrad ku lahaa Tuulladda Asanda ee Degmadda Strand ee magaalladda Cape Town ee dalkaasi.
Dadka deggan Wadada Mkhungela Street oo uu ku yaallo Dukaanka lagu weeraray Ganacsatadda Soomaalida ayaa sheegay inay ku soo baxeen dhawaaqa rasaasta ka dhacday Deegaankooda.
Shabakadda Wararka ee news24.com ayaa qortay inay Burcadda Konfur Afrikaanka ay aroornimadii Talaadada ee la soo dhaafay weerareen isla markaana ay toogteen 2 Muwaadin Soomaali oo kala ahaa Ganacsadaha Dukaanka iyo Kaaliyahiisa oo ku dhex sugnaa goobtooda Ganacsiga.
Dukaanlaha oo 37-jir ah ayaa la sheegay inay rasaas kaga dhacday Luqunta, wuxuuna ku geeriyooday isla goobta, halka Gacan-yarahiisa laga toogtay Gacanta, kaasi oo la dhigay Isbitaalka, isagoo ka soo kabanaya dhaawicii soo gaaray.
Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in Gnaacsadaha Soomaalida ee la dilay lagu magacaabi jirey Madaale, kaasi oo muddo 3 jeer ah ku sugnaa Tuulladda lagu dilay ee Asanda ee duleedka Cape Town.
Ganacsade kale oo Soomaali ah oo lagu magacaabo Axmed Muuse o ola hadlay Wargeyska City Vision ayaa sheegay inay labo burcad ah yimaadeen Goobta Ganacsiga ee lagu magacaabo Bafana Cash Store, isla markaana ay geysteen dil iyo dhaawac, ka hor intaysan la baxsanin lacag caddaan ah iyo sigaar yaallay Dukaanka uu lahaa Marxuumka Soomaaliga.
Dhinaca kale, Koox Muwaadiniin Soomaali ah ayaa gaaray goobta lagu dilay Marxuumka, si ay u eegaan waxa ay ku taageeri karaan Marxuumka.
Saddex Alifle Mathokozisi Gama oo ka tirsan Boliska Deegaanka ayaa sheegya inay fureen Gal-dacwadeedka dilka, dhaawaca iyo dhaca loo geystay Ganacsatadda Soomaaliyeed, balse, ma jirto cid loo soo qabtay dhacdadaas murugada leh.
Waxa uu sheegay inaysan xaqiijin Karin tirada burcadda gudaha u gashay Dukaanka ama nooca gaariga ee ay Burcadda wadatay, kuna baxsadeen.
13 qof oo la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen Diyaarad lagu la’aa dalka Hindiya